Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 23/10/2020)
Ehe, Chitima chikafu kunogona kuva zvinoshamisa asi kwete kunyange yakanakisisa chitima chikafu chingaenzana Copenhagen raMwari Noma! ndiye bhikoni kuti Nordic chikafu, uye unofanira kuita zvose zvaunogona kuti uende kutarisa kuti kunze. Haangorina uyu ndiye mumwe Best Cities kuti Foodies mu Europe, eatery has been the No. 1 nzvimbo pamusoro San Pellegrino pryslys kwemakore! Ehe, mutengo marefu, asi manakiro chauri kuwana zviripo. Kana uchida mifananidzo inokukurudzira pamusoro kuna dzekuma Scandinavia nechitima, Copenhagen iguru suo chemabhazi yokuita izvozvo.
isu chidhindo our list of Best Cities for Foodies with Trieste, Itari
Trieste vaiva hweAustria-Hungary kusvikira Hondo Yenyika I. Izvi pano chaipo chinowedzera zvinorehwa richinaka madhishi Trieste raMwari. Sei? Nekuti nhoroondo Trieste akasiya wandei inobatsira pamaitiro ayo chili. Atypical of zvemo Italian madhishi, Trieste prides yakadaro shamisa combos ose Pasta uye Pizza pamwe sauerkraut uye sliced ​​soseji, uye zvakafanana. Nakidzwa Vakamupfekedza chikafu, creamy chokoreti, uye chinoshamisa kofi muguta umo James Joyce akatanga kunyora Ulysses. A hunoshamisa maonero mhiri Adriatic hazvizorwadzisi yenyu kwokushumba, kana. Kubatana pakati Italy uye Slovenia akakwana rails, saka unogona kupa Slovenia mukana vari munharaunda.